ခြံထဲမှာပဲ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့ကို ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွဲခဲ့ကြတဲ့ နေခြည်ဦးတို့ မိသားစု - Cele Gabar
Beauty Blogger တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်မျက်စိရှေ့ကို ရောက်လာခဲ့သူနေခြည်ဦးကတော့ အခုဆိုရင် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါ တစ်စထက်တစ်စ ပရိသတ်အချစ်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့သူပါ။ တက်ကြွလန်းဆန်းပြီး အမြဲကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့ ပုံစံကို ချီချီနဲ့ အမြဲတွဲမြင်နေရမှာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အတွက်လည်း ပျော်စရာလေးတွေကိုသာ မျှဝေပေးလေ့ရှိသူပါ။
ဒီနေ့မှာလည်း Stay Home ကာလ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် ဖန်တီးပေးဖြစ်တဲ့ ကြည်နူးစရာမိသားစုအချိန်လေးကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးကတော့ နေခြည်ဦးဖခင်ရဲ့ အသက်(၅၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး အခုလိုအပြင်ထွက်လို့ မရတဲ့အချိန်မှာ ခြံထဲမှာပဲ မွေးနေ့ပါတီလေးကို မိသားစုတွေသိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဖေဖေ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ မောင်နှမတွေစုပြီး မိဘနှစ်ပါးကို ကန်တော့ခဲ့တဲ့အပြင် ခြံထဲမှာ ရေကူး၊ဆော့ကစားရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ချီချီကတော့ ဖခင်အတွက် ” Happy 54th Birthday ချစ်ဖေကြီး…. မိုးရေထဲ ခြံထဲမှာလုပ်ဖြစ်တဲ့ မိသားစုမွေးနေ့ပါတီလေး…. အရမ်းပျော်တယ် အရမ်းလည်းချစ်တယ်… သမီးတို့နဲ့အတူ ဖေကြီး နောင်နှစ်ရာစုနှစ်တွေအထိ အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ” ဆိုတဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးနဲ့အတူ မိသားစုပျော်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တာမို့ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။